Asambodo MCSE - All You Need To Know - ITS Tech School
Ntuziaka nke MCSE
Kedu ihe MCSE pụtara?
Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) bụ usoro ntinye akwụkwọ maka ndị ọkachamara na kọmputa / ndị injinia na-achọ ịbawanye na ngalaba nke IT, ngwọta na nchekwa. Ndepụta nke MCSE na-eme ka ndị ọkachamara IT nweta ọrụ na-eme ka ha nwee ike ịmepụta akụrụngwa yana ịwụnye, ịhazi, ịhazi na nsogbu. Asambodo ahụ na-egosiputa ikike nke ndị ọkachamara ịkwaga ngwọta nakwa usoro maka ọdịmma / ọrụ nke azụmahịa.
Ònye na-enye aka ntinye aka MCSE?
Dị ka aha ahụ na-egosi n'ụzọ doro anya, Microsoft na-enye ikikere a. Nkwekọrịta Microsoft na-akwado njirimara ọkachamara n'iji teknụzụ Microsoft. Ihe nchoputa MCSE bu ihe kachasi ama nke akwukwo asambodo nke di n'okpuru Microsoft Certified Professional (MCP) nke edeputara iji wulite ikike nke madu iji mejikota onodu Microsoft di iche na holistically na gburugburu ahia.
Gịnị bụ ebum n'uche nke MCSE?
Ebumnuche ebumnuche nke MCSE bụ iji nweta njedebe nkà na ụzụ kachasị elu na ndị ọkachamara. Ndị mmeri ga-amụta nkà a chọrọ
Wụpụta igwe ojii na-agbanwe agbanwe;
Na-agba ọsọ nke ọma na nke oge a;
Mee atụmatụ, mezue & gbanwee ihe dum dum ma ọ bụ ihe ndị dị na ya;
Jikwaa data, usoro & aha ya;
Ihe metụtara IZIRỊTA.
Kedu ihe nkwere ruru eru iji gosi maka certification MCSE?
Iji gosi na nyocha MCSE, ndị ga-aga ime nwere ihe Akaụntụ MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate).
Ogologo oge ole ka usoro ahụ dị?
Dabere na modulu a họọrọ, ogologo oge nwere ike ịdị iche site na ọnwa 2 ruo ọnwa 6.
Nhazi nke usoro ntinye akwụkwọ MCSE:
Ị nwere ike ịnweta MCSE na mpaghara niile a kpọtụrụ aha. Klaasị ọ bụla nwere teknụzụ teknụzụ ha nke edepụtara n'okpuru:
Ígwé ojii na Ihe Njirimara -Windows Virtualization Server na Microsoft Azure
Ubu oke -Microsoft Office 365, Microsoft Office Exchange, Skype maka Business & SharePoint
Njikwa data na nchịkọta -Ntọala SQL
Ngwa Ngwaahịa -Microsoft Dynamics 365, SQL Server
Kedu ihe bụ MCSE recertification - gịnị kpatara ọ chọrọ?
Asambodo Microsoft nọgidere na-aba uru ma dị irè ma ọ bụrụhaala na ụlọ ọrụ na-eji teknụzụ kpuchie n'okpuru asambodo. N'ime oge ụfọdụ, asambodo lara ezumike nká wee ghọọ ihe nketa. Microsoft emelitewo iwu nchighari ha nke choro ndi okachamara IT nile ka ha megharia akwukwo ikike MCSE ka ha na-abia na ugbua ka a na-eweputa mmuta ohuru ohuru site n'oge ruo n'oge. Site n'oge ruo n'oge, mgbe a na-ewepụta teknụzụ ọhụrụ na ule ha Microsoft, Ndị ọkachamara IT dị mkpa iji melite nkà ha na ihe ọmụma ha site n'itinye ule ndị a.
Kedu ole ị ga - eji gụọ iji kpochapụ ule ahụ?
Anwalewo akwụkwọ nyocha nke MCSE iji kpee ma ikike yana nkà nke onye na-eme nchọpụta na teknụzụ. Ikwesịrị ịde akara 70% iji kpochapụ nyocha Microsoft. Inweta nghazi nghota zuru oke dị oké mkpa. Ọ bụrụ na mmadụ enweta nnukwu pasent na otu ọkachamara ọkachamara na pasent dị ala na nkà ọzọ, ọ nwere ike iduga na FAIL. Ya mere, nkwadebe zuru oke dị mkpa. Ọzọkwa, ihe ọmụma bara uru kama ịmalite ịmụta ihe ga-enweta nsonaazụ chọrọ.
Iji nweta akara aka MCSE, onye ọ bụla kwesịrị ikpochapụ ule asaa. Igwe maka ule ọ bụla na-akwụ ụgwọ dịka Rs. 8000. Mmefu ndị ọzọ a gụnyere ihe ọmụmụ akwụkwọ na ntụziaka ọmụmụ nke ndị ọchọrọ chọrọ ịkwụ ụgwọ.
Onye na-enwerịrị ike ịhọrọ iji aka site na Ụlọ Ọrụ Ọzụzụ Microsoft ma ọ bụ nwee ike ịbanye na ụlọ akwụkwọ a ma ọ bụ nyere aka n'ịkwadebe maka ule na usoro a.
Otú ọ dị, ọ bara uru ịkọwa, na, ogologo oge uru ego nke inweta asambodo a dị oke aka karịa ụgwọ efu.
Oge nke ule
A ghaghị imecha nyocha nke MCSE na minit 150. Otú ọ dị, maka ndị na-asụ asụsụ ha abụghị asụsụ Bekee ma ha ahọrọ ka ha nyochaa n'asụsụ Bekee, a ga-enyefe ogologo oge.
Ebe obibi nke ule
N'ọtụtụ mba, e nwere ụlọ ọrụ Pearson VUE, ebe ndị mmeri nwere ike ịme nyocha ndị a. Ọ bụrụ na ndị mmeri ahụ ekpebiwo ịbanye na ụlọ akwụkwọ ọzụzụ, ọ nwere ike ịnwe akụrụngwa nke aka ya na ebe ya onwe ya iji nyere ndị na-aga ịmebanye aha aka ịdenye ma gosipụta ụdị modulu nke asambodo ahụ.
Kedu ka a ga - esi tinye akwụkwọ ikikere MCSE?
N'ịbụ ndị mezuru usoro iwu ruru eru, ntinye aka MCSE na-eme ka onye nyocha ahụ nwee ọrụ site n'ịkwado ọrụ nkà na ụzụ ha. Ha ruru eru maka ọrụ dịka onye ọkachamara na-akwado kọmputa na onye nyocha ihe ọmụma. Asambodo ahụ na-akwadebe ndị ọkachamara nwere nkà dị iche iche metụtara imebe, imejuputa na inye ọrụ nkà na ụzụ iji ntanetị nkesa Microsoft.
Onye ọkachamara na MCSE nwere ike ịhọrọ ọrụ ọrụ n'etiti mpaghara ndị a kpọtụrụ aha:
Onye nchịkwa usoro ihe ọmụma
Onye nyocha nke oru netwọk
Nyocha System, na
Ọdịnihu nke ndị ọhụụ na-apụta maka nyocha akaebe nke MCSE
Otutu ndi oru tinyere ndi mmadu nile n'eme ihe n'uwa na-eji ngwaahịa Microsoft ma choo ndi mmadu mara amara na MCSE. A pụrụ iji nkà na ihe ọmụma a na-enweta site na usoro a mee ihe na usoro dị iche iche nke IT n'ime otu nzukọ, ya mere ọkachamara nwere ike ịhọrọ ebe ọ nwere mmasị n'ime nzukọ ahụ. Ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ndị ọkachamara nwere ọkachamara nke ọma na nke a bụ otu n'ime ihe ndị dị na nhichapụ ule. Ọ bụrụ na ntinye akwụkwọ nke onye na-akwado nwa akwụkwọ a na-akwado ya na Sciences Kọmputa, ọ dịghị njedebe na uto nke ọkachamara na MCSE nwere ike ịgba àmà.